Tababarka Xeerka Anshaxa | Carewell SEIU 503
Diyaarinta Fasalka. Waan soo dhaweyneynaa waana taageereynaa adiga iyo dhamaan kaqeybgalayaasha waxaanan idinka codsaneynaa inaad timaadaan fasal nasasho leh diyaarna u ah barashada. Waxaad ubaahantahay qalab mobilada qeyb kamid ah koorsada. Tusaalooyinka qalabka mobilada waxaa ka mid ah taleefan, kiniin, ama laptop. Fadlan soo qaado qalabkaaga mobilada oo ku dheji habka aamusnaanta markaad timaado. Carewell waxay lahaan doontaa tiro kooban oo qalab ah oo loo heli karo amaah haddii aadan haysan aaladda moobaylka. Nasashooyin qorshaysan ayaa la siin doonaa; si kastaba ha noqotee, qadada lama bixin doono inta lagu jiro tababarka.
Imaanshaha iyo Daahitaanka. Fadlan qorsheyso inaad timaadid 10 daqiiqo ka hor intaan fasalku bilaabmin. Haddii aad timaaddo in ka badan toban daqiiqo ka dib bilowga kalfadhiga, ma awoodi doontid inaad ka qaybgasho waxaana lagu weydiin doonaa inaad dib u dhigato jadwalkaaga.
Akhlaaqda Fasalka. Si loo hubiyo jawi waxbarasho oo raaxo leh dhammaan kaqeybgalayaasha, fadlan ha u isticmaalin caraf udgoon. Fadlan sidoo kale la soco sida nadaafadaada shaqsiyeed ay saameyn ugu yeelan karto khibrada kaqeybgale kale ee fasalka. Fadlan noqo kaqeybgal firfircoon fasalka oo ixtiraam kuwa kale. Sigaar cabidda iyo isticmaalka daroogada ama aalkolada looma oggola gudaha ama hareeraha fasalka. Kharibaadda, xatooyada, iyo aflagaadada / aflagaadada shaqaalaha ama kaqeybgalayaasha lama soo dhaweynayo. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad baxdo haddii aad muujiso dabeecad qas ah oo saameyn xun ku yeelata badbaadada dadka kale ama awoodda ay u leeyihiin inay wax bartaan.
Habdhaqanka internetka. Wixii khadka tooska ah tababarka, waxaad la macaamili doontaa kaqeybgalayaasha kale iyo tababarayaasha Carewell iyada oo loo marayo guddi wadahadal oo khadka tooska ah ah iyo / ama wadahadal fasal dalwad ah Waxaan kaa codsaneynaa inaad noqotid mid wax soo saar leh oo xirfad leh dhammaan goobaha internetka si aad gacan uga geysato abuuritaanka jawi waxbarasho oo raaxo leh dhammaan. Waan tirtiri doonaa wixii faallooyin qoran ah ee jabiya Xeerkan Anshaxa ama soo bandhigaya macluumaadka macmiilka ee sirta ah. Waxaan ka saari karnaa bartayaasha dagaalka leh, aan dareen lahayn, u hanjabaya, carqaladeyn kara, isticmaalaya cay, ama haddii kale saameyn xun ku leh deegaanka waxbarashada.
Kala duwanaanta, Sinnaanta, iyo Ka mid noqoshada. Carewell SEIU 503 waxay aaminsantahay in jawi kaladuwan, loo dhan yahay, iyo amaan uu yahay midka ay dhamaan shaqaalaha iyo kaqeybgalayaashu dareemaan soo dhaweyn. Waan ixtiraameynaa oo qadarinaynaa waaya-aragnimada nolosha ee kaladuwan waxaanan dooneynaa inaan hubinno in dhammaan codadka la qiimeeyo. Ma aqbali doonno cagajuglaynta ama xoogsheegashada shaqaalaha ama kaqeybgalayaasha.
Markaad kaqeyb gasho Tababarka Carewell SEIU 503, waxaad ogolaatay inaad hubiso cadaalad iyo badbaado dhamaan kaqeybgalayaasha kale. Waxaad ogolaatay inaad u hogaansanaato Xeerka Anshaxa ee kor ku xusan dhammaan dhinacyada Daryeelka ‘Carewell SEIU 503 Training’, shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah. Haddii aadan u hoggaansamin codsiyadaas macquulka ah, shaqaalaha Carewell waxay qaadi doonaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay wax uga qabtaan wixii aan u hoggaansamin Xeerkan Anshaxa. Haddii aad wax su’aalo ah ama su’aalo ah ka qabtid Xeerkan Anshaxa, fadlan noo soo dir emailkan: carewellSEIU503Training@RISEpartnership.com